Sahirana izy ireo tsy afaka ny nialoka firy satria mbola nikajy ny lera kely izay hahafahana manao famerenana farany any an-trano no koa mba hialàna sasatra kely. Ny taksibe moa dia fisisihana hatrany ary ny rano teny amin’ny arabe niakatra. Azo sary an-tsaina amin’izany ny ady mafy niainan’ireo tanora omaly. Niady irery tanteraka.
Efa olona roa izao no matin’ny aretina pesta hatramin’izao ao Ankazobe. Lehilahy iray 40 taona sy ny zanany lahy ireo maty ireo. Ilay zanany no maty voalohany ary avy hatrany dia nalevin’ny olona na dia mbola fanahiana fotsiny aza ny amin’ny hoe pesta. Nifindra tamin’ilay raimpianakaviana ny pesta avy eo ka nahafaty azy koa. Olona 11 no efa hanaoana fizahana fahasalamana satria nifanerasera tamin’izy ireo ka atahorana ho nifindrana. Ahiana mafy ny hiparitahan’ity valan’aretina ity raha tsy voafehy haingana amin’izao fahatongavan’ny orana izao.
Nanao fifonana imasom-bahoaka tao am-piangonana omaly i Hery Rasoamaromaka izay vao voatendry ho governoran’Analamanga. Nahatsapa ny tenany fa nisy ny fiteny sy fihetsika tsy mendrika nataony hatramin’izay ka nangataka famelana ho an’izay voakasika ny tenany. Mampifona tokoa ny fanaovana politika rehefa te hadio eo imason’ny hafa. Ny sasany izany mahavita ranomasom-boay ihany.
Efa tafiditra tanteraka ao anaty ny vanim-potoanan’ny fahavaratra isika amin’izao, hoy ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampasapito. Tsy hijanona intsony ny orana manomboka izao ary hisesisesy izany ato anaty ny andro vitsy raha ny fanazavan’ny manampahaizana hatrany. Tsy mbola misy kosa aloha na izany ny rivodoza mananontanona. Raha zohina amin’izany dia tsy misy intsony izany ny vanim-potoana lohataona. Miova tanteraka ny toetry ny andro.
Mbola haverina dinihina amin'ny fivoriana ara-potoana manaraka indray ilay lalàna mifehy ny mpanohitra. Mangataka ny hitondran'ireo loholona ny soso-kevitr'izy ireo ny Antenimieram-pirenena amin'ity lalàna ity ary tsy horaisin'izy ireo anefa izany raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Efa hita taratra tokoa ny tsy fifankahazoan'ny Antenimiera roa tonta.
Tsy eken'ireo mponina ao Ambohitrimanjaka ny hananganana ny Tanamasoandro eo amin'ny tanimbaran'izy ireo. Efa maherin'ny 40 ha ny velarantany alaina amin'ny vahoaka madinika hanaovana an'ity fotodrafitrasa ity. Fatra-pisehoseho ny mpitondra fa efa milamina ny fifampiresahana amin'ny vahoaka kanefa tsy dia izay loatra no mitranga. Ny tena tsy zakan'ny mponina, ireo sinoa izay hanao ny tetikasa no mitady handroaka an'izy ireo amin'ny taniny.
Mifatotra fingotra ny "rotules de direction" an'ilay fiara tasibe izay nivadika tetsy Tsarasaotra-Ivato. Izany dia mbola manaporofo hatrany ny fisian'ny kolikoly eo amin'ny sampan-draharaha misahana ny fitsirihana ara-teknika. Fiara toy izany ve dia mbola tokony hahazo hiasa, indrindra fa hitatitra olona ? Betsaka izay efa maty izay noho ny olana ara-teknika amin'ny fiara ary mila mandray fepetra matotra momba ny fitsirihana ara-teknika izay matetika hanjakan'ny kolikoly.
MINISITRA MPAMONO AFO
VAZAHA HITA FATY
Vazaha iray miboridana no hita faty natsingevan'ny ranomasina teo amin'ny mifanandrify ny seranan-tsambon'i Toamasina. Novonoina izy io dia natsipy tao anaty ranomasina raha araka ny fanamarihan'ny polisy siantifika. Tsy nisy naka ny razana raha tsy efa hariva be ny sabotsy teo noho ny fifanilihana andraikitra teo amin'ny mpamonjy voina an'ny kaominina sy ny an'ny ladoany.
Mpikarakara ny raharaha mahakasika ny fifandraisana iraisam-pirenena eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika no nampanantsoin’ny Bianco ary nentian teo anivon’ny fampanaovana miady amin’ny kolikoly omaly. Fanodinkodinam-bolam-panjakana avy amin’ny fanaovana kolikoly no vesatra nanenjehana azy. Izao sahady izany dia efa nahazo volon-tany ny mpiasam-panjakana ambony, indrindra ireo izay nomena fahatokisana ary tan-dapa. Tamin’ny ora nanoratana dia mbola nitohy ny fihainoan’ny mpitsara mpanao famotorana azy.